Arduan (အာဒူရမ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Arduan (အာဒူရမ်)
Arduan (အာဒူရမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Arduan (အာဒူရမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Arduan (အာဒူရမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Arduan® ကို လေပြွန်အတွင်း ပိုက်ပြွန်ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် ကြွက်သား ဖြေလျော့မှု မိနစ် ၂၀-၃၀ လိုအပ်သော ခွဲစိတ်မှု အတွင်း မေ့ဆေးပေးရာတွင် ကြွက်သားများ ဖြေလျော့ရန် အသုံးပြုသည်။
Arduan (အာဒူရမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို ထိုးဆေးအနေဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်သည်။ ကြွက်သားများ ဖြေလျော့ဆေးများနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော အရည်အသွေးပြည့် ဆရာဝန်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်သာ ထိုးပါ။
Arduan (အာဒူရမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Arduan® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Arduan® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Arduan® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Arduan® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Arduan (အာဒူရမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေး မသုံးမီ သင်သည် အောက်ပါတို့ကို သိထားသင့် သည်။
ဆေးကို အသက်ရှူ ကိရိယာများ နှင့် အရေးပေါ် အသက်ရှူခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သော အထူးကု ဆရာဝန်များ ရှိသည့် အထူးကုဆေးရုံတွင် သာ အသုံးပြုသင့်သည်။
ခွဲစိတ်မှု အတွင်းနှင့် ခွဲစိတ်ပြီးခါစ လုံလောက်သော ခံနိုင်ရည်အား ပြန်မရခင်အတွင်း အရေးပါသော ခန္ဓါကိုယ် လုပ်ငန်းများကို ဂရုပြု၍ စောင့်ကြည့်ပါ။
ဆေးအချိုးအစားကို တွက်ချက်ရာတွင် မေ့ဆေး၏ နည်းလမ်း၊ အခြားဆေးများနှင့် ဖြစ်နိုင်သော သက် ရောက်မှု၊ မေ့ဆေး အတွင်း သို့မဟုတ် မေ့ဆေး မတိုင်မီ ပေးခြင်း၊ လူနာ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆေးအပေါ် တုံ့ပြန်မှု အခြေအနေ တို့ကို စဉ်းစားသင့်သည်။
ကြွက်သား ဖြေလျော့မှုကို ဖြစ်စေသော ဆေး ပမာဏသည် နှလုံးနှင့် သွေးကြောအား သိသာသော သက်ရောက်မှု မရှိပါ။ အများစုတွင် နှလုံးခုန် နှေးခြင်းကို မဖြစ်စေပါ။
ဆရာဝန်ပြသမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆေး မသောက်မီ ဆေးအချိုးအစား ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ဦးစွာ ဂရုစိုက်စဉ်းစားသင့်သည်။
ဆေးလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကြွက်သားများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုကို သေချာ စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် peripheral nerve stimulator ကိုသုံးပါ။
ကြွက်သားနှင့်အာရုံကြော သယ်ပို့မှုရောဂါများ၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်ခြင်း၊ အသည်း နှင့် သည်းခြေလမ်းကြောင်း ပျက်စီးမှုရှိသော လူနာများ၊ myocardial indicate polio ဖြစ်ဖူးသူများတွင် ဆေးကို ပမာဏ အနည်းငယ်သာ ပေးသင့်သည်။
အသည်းလုပ်ငန်း ပုံမှန်မရှိသူများတွင် Arduan ကို ဖြစ်နိုင်သော ဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုး ပိုရနိုင်သော အခြေအနေများတွင်သာ ပေးသင့်သည်။ ဤဆေးကို ဆေးစွမ်းပြနိုင်သော အနည်းဆုံးပမာဏဖြင့်သာ ပေးသင့်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း နှင့် အဝလွန်ခြင်းသည် Arduan® ၏ကြာချိန်ကို မြင့်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေး ပမာဏကို ကိုယ်အလေးချိန် ပေါ်မူတည်ပြီး သုံးသင့်သည်။
ကြွက်သား ဖြေလျော့ဆေးများကို ဓါတ် မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုရှိသူများတွင် Cross-hypersensitivity ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အထူးဂရု ပြု၍ သုံးပါ။
စက်ကိရိယာများ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Arduan (အာဒူရမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် နို့တိုက်စဉ်တွင် ဤဆေး သုံးခြင်းသည် ဘေးကင်းသလား သေချာ မသိရှိပါ။ ဤဆေး မသောက်မီ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုးကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန် နှင့် အမြဲ တိုင်ပင်ပါ။
Arduan (အာဒူရမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဤဆေး အသုံးပြုစဉ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး အချို့မှာ
ဓါတ်မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုကြောင့် လည်မျို ပိတ်ဆို့ ခြင်း
နှလုံးကြွက်သား သွေးမရခြင်း ( နှလုံးကြွက်သား မပုပ်မီ) နှင့် ဦးနှောက်
PTT နှင့် prothrombin time ကျခြင်း
သွေးတွင်း creatinine များခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Arduan (အာဒူရမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Arduan® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
ကြွက်သား ဖြေလျော့ဆေး nedepolyariziruyuschie
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Arduan (အာဒူရမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Arduan® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Arduan (အာဒူရမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Arduan® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Arduan (အာဒူရမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပြွန်သွင်းခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ခွဲစိတ်မှုအတွက် အစပျိုး ဆေးပမာဏမှာ 80-100 ug/kg body weight ဖြစ်သည်။ ပြွန်သွင်းရန် အတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေ ၁၅၀-၁၈၀ စက္ကန့် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အာရုံကြောနှင့် ကြွက်သား ပိတ်ဆို့မှု ကြာချိန်မှာ ၆၀-၉၀ မိနစ်ဖြစ်သည်။
Succinylcholine ပြွန်သွင်းပြီးနောက် ခွဲစိတ်မှုအတွင်း ကြွက်သားဖြေလျော့စေရန် အစပျိုး ဆေးပမာဏမှာ 50 ug/kg of body weight ဖြစ်ပြီး ၃၀-၄၀ မိနစ် ထောက်ပံ့ပေး သည်။ ဆက်လက်ထိန်းသော ဆေးပမာဏမှာ 10-20ug/kg ဖြစ်ပြီး ၃၀-၄၀ မိနစ် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းတွင် ဆေးပမာဏကို CC နှင့်အညီ တွက်ချက်သင့်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Arduan (အာဒူရမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၃လအရွယ် ၁နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ဆေးပမာဏ ကို 40ug/kg body weight ဖြင့် တွက်ချက်သည်။ ( ကြွက်သား ဖြေလျော့ခြင်းကို ၁၀-၄၄ မိနစ်ကြာ ထောက်ပံ့ ပေးသည်)
အသက် ၁နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ကလေးများတွင် ဆေးပမာဏ သည် 57 mg/kg ဖြစ်သည်။ ( ကြွက်သားဖြေလျော့ခြင်း ကို ၁၈-၅၂ မိနစ်ကြာ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
Arduan (အာဒူရမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Arduan® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
ထိုးဆေး။ Pipecuronium Bromide ၁၀ မီလီဂရမ်
ထိုးဆေး။ Pipecuronium Bromide ၄ မီလီဂရမ်
ဆေးလွန်ခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ ကြွက်သားများ အချိန်ကြာစွာ အကြောသေခြင်း၊ အသက်ရှူရပ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် သိသာစွာ ကျခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
Arduan® (pipercuronium bromide).http://omedicine.info/en/Arduan.htmlAccessed November 19, 2016
MEDICATION: ARDUAN® (PIPERCURONIUM BROMIDE).http://www.medicatione.com/?c=drug&s=Arduan&ingredient=pipecuronium%20bromideAccessed November 19, 2016.
Local Anaesthetic (ထုံဆေး)
Regional Anesthesia ဆိုတာဘာလဲ သူ့ရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေက ဘာလဲ
စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးတို့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ